आइसिटी टुरजिम | ictkhabar
आइसिटी टुरजिम (Total Posts : 2512 )
न्युयोर्क सिटीमा गुगलको पहिलो भौतिक पसल गुगल स्टोर
न्युयोर्क सिटीमा आफ्नो पहिलो भौतिक पसलको रुपमा गुगल स्टोर खोल्ने घोषणा गुगलले गरेको छ ।
Read More Published on :5months ago
२०१९ का सबैभन्दा असुरक्षित पासवर्ड, भुलेर पनि प्रयोग नगर्नुस्
सेक्योरिटी सर्भिस कम्पनी स्प्लास डाटाले सन् २०१९ का सबैभन्दा असुरक्षित पासवर्डको सूचि सार्वजनिक गरेको छ । यी पासवर्डहरु यस वर्ष सबैभन्दा धेरै ह्याक भएका पासवर्डमा परेका छन् । पछिल्ला धेरै वर्षहरुझैँ यो वर्ष...
नेपाली स्याट–१ ले पठाएको छ तीन देशको तस्बिर
काठमाण्डाै - नेपालले पहिलो पटक प्रक्षेपण गरेको भू-उपग्रह नेपाली स्याट–१ ले भुटान, बङ्गलादेशको ढाका तथा भारतका आसाम, दार्जिलिङ र सिक्किमका भूभागको तस्बिर लिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले आफ्नो कार्यालयमा सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम ग्राउण्ड स्टेशन जडान गरेसँगै...
वाइफाईको पासवर्ड सुरक्षित कसरी राख्ने ?
छिल्लो समयमा वाइफाई चोरी हुने भइराखेको हुन्छ । यसबाट बच्न वाइफाईको पासवर्डलगायत केही कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । वाइफाईको पासवर्ड सुरक्षित राख्न ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु १. पासवर्ड कम्तीमा पनि आठ अक्षरभन्दा...
अब मोबाइलबाटै ट्याक्सी रिजर्भ, ट्याक्सीमाण्डु एप
ट्याक्सीमाण्डु सर्भिस प्र्रालिले ‘ट्याक्सीमाण्डु एप’ सार्वजनिक गरेको छ । यो एपले ग्राहक खोज्दै भौतारिनुपर्ने ट्याक्सी चालकहरुको समस्याको सामाधान हुने विश्वास गरिएको छ । यसकालागि ट्याक्सी चालक र यात्रुहरुका लागि छुट्टा छुट्टै एप संचालनमा ल्याइएको छ । चालकले आफ्नो मोबाइलको...
वाइफाइको स्पीड ह्वात्तै बढाउँछ, यी पाँच उपाय
तपाईँले इन्टरनेटको स्पीड सजिलै बढाउन सक्नुहुनेछ । यहाँ तपाईंलाई केहि यस्तो सजिलो तरिका बताउने प्रयासमा छौं जसको सहयोगबाट तपाईंको पुरानो वाईफाई राउटर परिवर्तन नगरिकन नै यसको स्पीडलाई दोब्बरसम्म बढाउन सकिन्छ। राउटर राखिएको स्थान : तपाईंको वाईफाईको राउटर कुन स्थानमा छ त्यसले स्पीडमा...
फेसबुकबाट फोटो गुगलमा सार्न सकिने फिचर
फेसबुकले प्रयोगकर्ताका लागि एक फिचर ल्याएको छ । उक्त नयाँ फिचरको सहयोगबाट फेसबुक प्रयोगकर्ताले आफ्नो फोटो तथा भिडियो फेसबुकबाट गुगल फोटोजमा सार्न सक्नेछन् । फेसबुकको डाटा ट्रान्सफर प्रोजेक्टले एप्पल, गुगल, माइक्रोसफ्ट तथा ट्वीटरसँग मिलेर प्रयोगकर्तालाई आफ्ना डाटाहरुलाई विभिन्न अनलाइन सेवाहरुको बीचमा...
टेलिकमले प्रिपेड सिम निःशुल्क बाँड्दै
नेपाल टेलिकमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नयाँ खाता खोल्ने ग्राहकलाई जीएसएम प्रिपेड मोबाइल सिम निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच आज उक्त सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको टेलिकमले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । बैंकले मुलुकभरका २३८ वटै शाखाबाट नयाँ खाता...